OTDYKH Ntụrụndụ Fair 2021 Ga-eme na Moscow Septemba 7-9
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » OTDYKH Ntụrụndụ Fair 2021 Ga-eme na Moscow Septemba 7-9
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
OTDYKH Ntụrụndụ Fair 2021
N'ịgbaso ọganiihu nke ngosi njem afọ gara aga n'agbanyeghị ihe ịma aka, OTDYKH alaghachitela maka mbipụta nke 27 nke ngosi ahụ. Ihe omume a ga-eme site na Septemba 7-9 a ga-eme ya na ebe ngosi ihe ngosi EXPOCENTRE.
A ga -enwe ụlọ ọrụ 400 sitere na mba 16 na mpaghara Russia 50 ga -esonye na mmemme njem njem na njem nlegharị anya a.
Mpaghara ndị ọrụ gọọmentị nke ngosi ngosi 2021 bụ Nizhny Novgorod.
A na -atụ anya ọtụtụ ndị ihe ngosi mba ụwa ga -alaghachi na ngosi njem a dị mkpa.
N'afọ a, a na -atụ anya na ụlọọrụ 400 ga -esi mba 16 na mpaghara Russia 50 bịa. Ọzọkwa, a na -ahazi ngosi ntụrụndụ OTDYKH igosi ihe kpatara ya ji bụrụ njem njem na njem nlegharị anya na Russia.
Afọ a na -ahụ nlọghachi nke ọtụtụ ndị nkwado mba ụwa. Mba ndị na -aga 2021 OTDYKH Ntụrụndụ Ntụrụndụ gụnyere Spain, Saịprọs, Bulgaria, Thailand, China na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọtụtụ mba Latin America ga -egosikwa ihe kacha mma ụlọ ọrụ njem ha nwere inye.
Otu n'ime mba ndị ahụ bụ Cuba, onye ga-eji ọmarịcha 100m² na-ekere òkè, na-aka akara mgbanwe ga-alaghachi n'ụdị ngosipụta ọrịa tupu ọrịa amalite. Ihe ngosi a na -enwekwa obi ụtọ ịnabata onye bịara ọhụrụ na mmemme a; mpaghara Ceará na Brazil, nke ga -enwe nguzo pụrụ iche. Mpaghara a dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ, ọ bụkwa otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya na Brazil na -aga. Steeti ahụ nwere nnukwu kilomita 600 nke oke osimiri nwere oke aja yana oke ọhịa National Araripe.
Ihe ngosi a na -anabatakwa ụlọ ọrụ njem Mexico 'Njegharị asaa' nke nwere ahụmịhe afọ 25 na ụlọ ọrụ njem. Njegharị asaa ga-esonye na anya ma gosipụta ụdị njem nlegharị anya Mexico, gụnyere osimiri na-eku ume nke Mexico, ọdịnala bara ụba, ezigbo nri na ọdịbendị pụrụ iche. Ha ga -egosipụtakwa ọmarịcha ile ọbịa nke Mexico ga -enye.
Njem nlegharị anya na Russia anọwo na-alọta nke ọma, na nke ugbu a, e-Visa ọhụrụ nke Russia na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịga mba ahụ. A bịa na mpaghara Russia, ndị bịara ọhụrụ ga -esonye na Ntụrụndụ OTDYKH. Nke mbụ bụ mpaghara Khanty-Mansi, ebe obibi nke ọmarịcha ụka Ọtọdọks nke mbilite n'ọnwụ. Nke abụọ bụ mpaghara Krasnoyarsk nke amaara maka ọmarịcha ọdịdị ala ya. A na -ahụta isi obodo mpaghara ahụ ka ọ bụrụ otu n'ime obodo mara mma na Siberia.